Hey’adda ka hortaga cunsuriyada oo ka hadashay wiil loo diiday inuu tukado salaada | Somaliska
Hey’adda ka hortaga cunsuriyada oo ka hadashay wiil loo diiday inuu tukado salaada
Hay’adda u qaabilsan dalkaan Iswiidhan ka hortaga cunsuriyadda (Diskrimineringsombudsmannen) ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano DO, ayaa ka hadashay dacwad dhawaan loo soo gudbiyey oo la xirriirtay wiil sheegay in iskuulka u diiday inuu soo tukado salaadaha jimcaha.
Wiilkan dacwada soo gudbiyey sanadkii ina dhaafay ayaa ah arday dhigta dugsiga sare, waxaana dacwad uu gudbiyey hey’adaas ku sheegay in iskuulku meel ugu dhacay xorriyadiisa diimeed oo ay diideen ineey fasaxaan maalmaha jimcaha saacado kooban si uu soo tukado salaada jimcaha.
Hey’adda oo amuurta wiilkaas ka hadashay ayaa sheegtay ineey dib u eegis ku sameeysay sharciyada u degsan dalalka Midowga Yurub iyo go’aano laga gaaray. Hey’adu waxaa ay ku dooday in dalku iskuuladiisa sare aaney qasab aheyn balse ardeyda dhigta iskuulka waajib ku tahay gudahashadda xiisadaha. Taas oo ah mid ay iskuuladdu ay yihiin kuwa leh go’aanadda diidmo iyo ogolaansho ee la xirriira qaadashadda fasax saacado kooban.
Salaada jimcaha waa salaada ay waajib ku tahay muslimiinta gaar ahaan ragga ineey ku tukadaan masaajidada halka dumarka la faray ineey guryahooda ku tukadaan taas ah mid u ajar badan. Balse arrimaha salaada ayaa mararka qaarkood waxaa ay ragga kala kulmaan caqabado aad u badan, gaar ahaan kuwooda ku nool dalalka Galbeedka.